It is me. Ko Niknayman.: နအဖရဲ့မီဒီယာများ လိမ်နေတာ ပေါ်တင်ကြီး အလိမ်ပေါ်ပြီ။
နအဖရဲ့မီဒီယာများ လိမ်နေတာ ပေါ်တင်ကြီး အလိမ်ပေါ်ပြီ။
အောက်တိုဘာ (၁၀)ရက်နေ့ ထုတ် New Light of Myanmar သတင်းစာ၏ စာမျက်နှာနံပါတ် (၃) အပေါ်ထိပ်
တွင် ကြည့်ကြပါ။ ကမန်းကတမ်း လိမ်လိုဇောဖြင့် ဖြတ်ညှပ်ကပ်လိုက်ရာ၊ နအဖတို့၏ မီဒီယာများတွင် လိမ်နေကျဇာတ်မှာ ဘူးပေါ်သလို ပေါ် သွားလေသည်။
Posted by Ko Niknayman at 11:02 AM